Ọrịa Ọrịa | Ngwọta OMG
Onye na - elekọta ụlọ ahịa: nje nje.
Ihe ịrịba ama na mgbaàmà
A na - amata ụbụrụ nke ọkụ site na ahụ ọkụ nke "atọ C" - coryza, conjunctivitis na ụkwara. Ihe ịrịba ama ndị a ga-akawanye elu n'ihe gbasara 3 ruo ụbọchị 4 gburugburu oge ahụ ọkụ ọkụ na-apụta. Mgbakasị ahụ amalite na ihu ma na-aga n'ihu na ụkwụ n'elu 3 ụbọchị na-agbanwe site na ihe dị iche iche na njedebe aghara aghara. Ozugbo ọkụ ọkụ ahụ gosipụtara, ahụ ọkụ na nsụgharị iku ume ka mma. Ọkụ ọkụ ahụ na-apụ na ụbọchị ole na ole na-esote ka ị hapụ ntụpọ na-acha uhie uhie na ikpochapụ akpụkpọ anụ. Usoro nke measles na-emekarị ka ọ dịkwuo oge 10. Oge nkwụsị bụ 10-12 ụbọchị.
Ọnọdụ nke gbasara
A na - agbasa mgbasa mpempe akwụkwọ site na ịchọta ya na nzuzo nke ndị ọrịa site na nnukwu mmiri ozuzo dị mkpa nke chọrọ njikọ chiri anya ma ọ bụ ihe ndị dị ntakịrị nke na-eme ka ọnọdụ dị anya gbasaa. Ntughari aka nwere ike ime site na nchọta ya ma ọ bụ ihe. A na-ewere mụọ dị ka onye na-efe efe site na mmalite nke mgbaàmà site na ụbọchị mbụ nke ọkụ ọkụ.
nchoputa a na-emekarị nlekọta ahụike. Nkwenye nwere ike ime site nyocha ngwa ngwa antigen ma ọ bụ ọgwụ mgbochi IgM.
Measles bụ ọrịa na-ejedebe onwe ya na ọgwụgwọ na-enye nkwado. A ghaghị inye ọgwụ nje nanị maka nsogbu ndị metụtara nje virus dịka mgbasa ozi otitis.
Ihe mgbaàmà nwere ike ịgụnye ntinye na ọnya ikuku.
Nzuzo 15367 21 Echiche Taa